Tiara "Lace sy mavokely mavokely" - Moi Mili
Home > Tiara "Lace sy mavokely mavokely"
Tiara "Lace sy mavokely mavokely"
Ny Moimili tiara "Lace sy pink sequins" no hevitra tonga lafatra ho an'ny andriambavy kely. Ny tiara dia voatana mafy avy amin'ny landy voajanahary, voaravaka dantelina sy sequins. Hanampy ankizy iray milalao, amin'ny fampisehoana any an-tsekoly na ho toy ny andiany amin'ny fotoam-pianarana. Izahay koa dia manome soso-kevitra hafa avy amin'ny fivarotanay.
Tiara dia tsara tarehy sy tsy mahazatra headgear ho an'ny andriambavy kely sy lehibe rehetra. Sarotra iray mahaliana amin'ny fotoam-pifaliana na fotoam-pianarana. Izy io dia vita amin'ny lamba landy, voaravaka dantelina sy sequins. Io akanjo io dia hanampy hamirapiratra amin'ny fomba rehetra.
Fitaovana: landihazo, sequins, lamba, mavokely mavokely
Default Title - PLN 31.00 PLN